Hiriirri mormii kaleessarraa itti fufee lubbuu namoota galaafate - BBC News Afaan Oromoo
Hiriirri mormii kaleessarraa itti fufee lubbuu namoota galaafate
Madda suuraa, Ashabbir
Rakkoo Rogeessaa fi Daayireektara OMN Jawaar Mohaammad mudateen walqabatee hirirri mormii magaalaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti Kaleessa gaggeefame har'allee magaalota akka Dodolaa, Amboo, Dirree Dhawaa, Shaashamannee, Bishooftuu, Adaamaafi kaanittis itti fufeera.
Daandiiwwan konkolaataa fi sochiin hawaasummaa naannolee hedduu keessatti akkuma adda citetti jira.
Ambootti hiriira har'aa kanarratti hiriirtotniifi qaamoleen nageenyaa walitti bu'anii haalli nagenyaa magaalitti daran yaaddessaa tu'u jiraataan magaalitti tokko BBC'tti himaniiru.
Dhukaasa guddaan kan dhagaahamu ta'uufi namoonni miidhaman akka jiran nutti himaniiru.
'Doorsiisni sun doorsisa ministira muummee tokkorraa hin eegamnedha'
Hiriira kaleessaa eegaleen ''namoonni hanga ammaatti du'an afur gahaniiru'' nuun jedhe jiraatan magaala Amboo kun.
Jiraataan biroon magaalichaa ammoo" Lubbuu namaa kaleessa magaala Ambootti darbeen alatti hiriira har'aa irratti namoonni shan rasaasan rukutamanii hospitaala seenaniiru" jedha.
Namoonni kunneen kam rukutaman waajjira bulchiinsaatii hanga buufata konkolaataa daandii jirurratti ta'uus himan.
Yeroo ammaas magaalichatti dhukaasni haalan jiraachuu fi ofiisaatii baqatee naannoo Awwaaroo akka jirus BBCtti himeera
Magaalaa bishooftuutti hiriirii mormii kaleessa eegale har'as itti fufee jira jedhu jiraattonni.
Jiraataan magaalaa Bishooftuu kan ta'e dargaggoo,Gammachiis Burqaa, kaleessa galgalarraa eegalee gareen faallaa sochii dargaggoota Oromoo qabatan walgurmeessuun jeequmsa uumaa turani jedha.
"kaleessa ganama akkuma hiriirri eegalameen sochii qeerroo kana dhaabsisuuf gurmaa'anii fuuldura dhaabbatanii ture. Booda humni qeerroo baayyinaan caaluu gaafa baran gara mana amantaatti baqata. Dargaggoonnis mana amantaa sana hin seenne ittuma dhiisani" jedha.
Sochiin akkasii galgalaa fi ganama kanas itti fufuu argeera jedha dargaggoon kuni.
" Kaleessa namni hiriira irraa gara manaatti akkuma galuu eegalaniin warri Oromoo hin taanee fi kaayyoo faallaa qeerroo ta'e qabanimmoo walgurmeessaa turan. Naannoo 'sarkilii' jedhamuttis sagalee dhageesisaa turan dhaadannoo qeerroo fi Oromoo arrabsu jechuudha" jedha.
Gareen faallaa qeerrootiin socho'an kunneen meeshaa waraanaa fi qara qabu qabatanii socho'us jedha.
Ganama kana magaalaa bishooftuuttu dhukaasni daran heddumaachuus hima.
Hogganaan Humna Addaa Oromiyaa komaander Baqqalaa Magarsaa haalli nageenya magaala Bishooftuu fooyya'iinsa kan agarsiise miti jedhu.
" karaan kaleessas har'as cufaadha hamma wantoonni karaa qabatanitti jijjiiramni ammatti hin mul'atu." Jedhan.
Miidhaa gahe kan ilaaleenis "kaleessa miidhaan guddaan gahee hin jiru. Har'a garuu haalichi kallattii biraa waan qabateef jiraachuu mala. poolisiin naannoo hamma danda'een tasgabbeessuuf hojjechaa jira" jedhan.
Magaalaa Adaamaattis ganama bariirraa eegalee sagaleen dhukaasaa dhagahamaa jira.
Walitti bu'iinsa Godina Baalee magaalaa Dodolaa keessatti har'a hiriira gaggeefame gidduutti uumameen namoonni afur du'anii gara Hospitaala Walii galaa Dodolaa dhufuusaanii Meedikaal Daarektarri Hospitaalichaa Doktar Tolaa Biyyu BBCtti himan.
Hiriiri kun kaleessa gara ganamaa nagaa turullee sa'a booda garuu gara jeequmsaatti geeddarame jedhu jiraattonni magaalattii.
Jiraataan magaalichaa BBC'n dubbise akka jedhutti walitti bu'iinsa uumammeen ''namoonni miidhamaniiru, manneen hedduun gubataniiru, suuqiiwwan saamamaniiru.''
Kaleessa namoonni lama rasaasaan rukutamanii gara Hospitaala Walii galaa Dodolaa dhufuun lubbuunsaanii akka darbee fi namoonni miidhaan guddaan irra ga'e sadi ammoo gara Hospitaalota Shaashamannee fi Hawaasaatti ergamuu dubbatan Doktar Tolaan.
Har'a gara barii ammoo namoonni afur uleen rukutamanii hospitaala seenuun achitti lubbuunsaanii akka darbe ibsan.
Jiraataan magaalaa Dodolaa kan biraan rakkoon kan mudate naannoo ganda 02 jedhamutti ta'uu eeranii manneen ja'a gubachuu, loon saamamuu fi meeshaaleen daldalaa gubachuu fi saamamuu ijaan arguu isaanii dubbataniiru.
Namoonni akka du'anii fi hedduun akka miidhaman arguusaanii kan dubbatan jiraataan kun walitti bu'iinsi inni har'aammoo fuulaa fi fuulaan ta'eera jedhan.
Haalli magaalattii keessa ture humna poolisii ol waan tureef raayyaan ittisa biyyaa seenee haala tasgabbeessaa jiraachuus dubbatan namni kun.
Diishitaa-giinaa- Muziqaa saba Arrii torbanootatti daawwattoota mil. sadi argate
Maatiin Obaamaa sareesaanii 'Hiriyyaa dhugaa' jehan du'eef gadda taa'aa jiru
Walitti bu'insi Israa'elootaafi Filisixeemota gidduutti uumame hammaachuun himame